Bekuqhuma inganono yodwa kuvaleliswa obethanda ukudlala izimoto | Eyethu News
WHO cites Zimbabwe record as outrage grows over Mugabe honour - 29 mins ago
Spain to dismiss Catalonia’s government, call elections - 30 mins ago
Trump says he’ll allow release of Kennedy assassination files - 31 mins ago
Bekuqhuma inganono yodwa kuvaleliswa obethanda ukudlala izimoto
“Kume nse ukuhamba kwezimoto ku-White road eGrange .”
Kungesikhathi kuvaleliswa omunye umthandi wezimoto uSthabiso Ngcobo eGrange ngempelasonto. Isithombe :Intatheli ye-Eyethu
Kuphazamiseke ukuhamba kwezimoto emgwaqweni waseGrange White Road ngeSonto ngesikhathi kuphuma umngcwabo ka Sthabiso “ Sthimba” Ngcobo. Lomngcwabo obungempelasonto ubungomunye wemibili wabalisa abahlanu abadutshulwa babulawa amaphoyisa eHilton emasontweni amabili edlule.
Labalisa babesolwa ngokuba yingxenye yobugebengu obuhleliwe lapho kwakudunwa kwebiwe izimoto kubuye kugqekezwe emizini kanye nasemabhizinisini ase Hilton. Iqulu labantu akade beyingxenye yalomngcwabo libuthelene kuWhite Road ukuzobona akade beshayela izimoto “beshaya izidudla” okuyinto ethathwa njengosiko lokuvalelisa abantu abathanda ukujaha izimoto.
Kungesikhathi kushaywa izidudla kuvaleliswa uSthabiso "Sthimba' Ngcobo ngempelasonto. Izithombe :Intatheli ye-Eyethu
Bekuzwakala iphunga lenjoloba njengoba izimoto bezishintshana ukwenza lomkhuba okuguga kuwo amathayi, kubuye kuqhume izibhamu nokuyinto ebithakaselwa abantu akade bekulomngcwabo. Amaphoyisa kade eme buqamama nesizinda salombukiso kanti awahlalanga isikhathi eside.
Olunye udaba : Bheka ivideo kuvaleliswa obathanda ukudlala izimoto
Indida ngobulewe washiswa eMtuba